ပင်မစာမျက်နှာ » productivity Apps ကပ » ဘက်ထရီဆရာဝန် 2018 - မြန်အားသွင်းကိရိယာ - စူပါ Cleaner
ဒီ app ကိုအထိရောက်ဆုံးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်က Android ပါဝါအာနိသင်တိုးမြှင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ထရီဆရာဝန် - ဘက်ထရီချွေတာကြောင့်စေီးကွောငျးစတင်သည်အခါတိုင်းရုံတစ်ခုတည်းကိုအသာပုတ်အတွက်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုကယ်တင်အသုံးပြုသူကူညီပေးသည်။ ဒါကစမတ်ဘက်ထရီ Optimizer သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုပိုကောင်းတဲ့ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်မှတ်ဉာဏ် Cleaner, Ram Booster အဖြစ်လည်ပတ်နေချိန်တွင်နောက်ခံ running app များကိုသတ်ဖြတ်ခြင်း, Task ကို Killer များအတွက် setting များကို enable လုပ်ဖို့စွမ်းရည်ကိုပေးသည်။ သငျသညျ 2x မှဘက်ထရီသက်တမ်းကိုတက်ကယျတငျနိုငျ - 4x တွေအများကြီးတလျှောက်ကပိုပိုမိုမြန်ဆန်ရသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုမြှင့်တင်ရန်ဖို့ပို။မှတ်စု:
ဒီ app ကိရိယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးခွင့်ပြုချက်ကိုအသုံးပြုသည်. It is necessary and used only for locking the device when you use the app. You need to enable Administration before it can be used. To uninstall the app, please go to the Setting page and click the “Uninstall” button
★ Fast အားသွင်း
ဘက်ထရီမြန်တာဝန်ခံသင့်ရဲ့ device ကိုသင်သည်သင်၏ဘက်ထရီထဲကအများဆုံးရမရတာဝန်ခံကျော်ရန်သင့်အားသတိပေးသေချာစေရန်တစ်ထူးခြားသော3အဆင့်အားသွင်းစနစ်ဖြင့်တရားစွဲဆိုထားတဲ့အတွက်ထုံးစံထိန်းညှိ။ ဒါဟာအစစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ပါဝါစားသုံးမှုကိုထိန်းညှိနိုင်မ features တွေရှိပါတယ်။
မှတ်ဉာဏ် (RAM) ကို clean up နှင့်မလိုအပ်တဲ့နောက်ခံတာဝန်များကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်ဖုန်းကိုမြန်နှုန်းပိုကောင်းအောင်။
Boot တက်မြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်အသုံးပြုမှုလျှော့ချဖို့ Auto-စတင် Apps ကပကိုရပ်တန့်။
1-ကိုထိပုတ်ပါမှတ်ဉာဏ်သန့်စင်ခြင်းနှင့်အာနိသင်တိုးမြှင့်ဝဒ်ဂျက် home screen ကနေတိုက်ရိုက်သင်၏ဖုန်းကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လွယ်ကူစေသည်။
ဘက်ထရီချွေတာတာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်အွန်လိုင်းဆက်သွယ်မှုမလိုအပ်ပါဘူးတဲ့ပါဝါ Optimizer app ကိုထက်ပိုပါတယ်။ ပင်မဟုတ်သောအမြစ်ကို Android ဖုန်းများပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲအပိုအားသွင်းရဖို့သင့်ရဲ့ installed ဘက်ထရီကိုအစားထိုးဖို့စိတ်ကူးထားခဲ့။ သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအသုံးမပြုသည့်အခါနက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်းမုဒ်ဘက်ထရီသက်တမ်းတိုးချဲ့သွားပါ။
စမတ်သန့်ရှင်းသိုလှောင်မှုပြန်ဖြစ်ရန်, ကျန်နေတဲ့ Junk ဖိုင်များကို cache ကိုဖိုင်တွေဖျက်ပစ်ရန်ကူညီပေးသည်။ သင့်ကိရိယာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေပါ။
ဒါဟာအမှန်တကယ်အချိန်အတွက်ဖုန်းရဲ့အပူချိန်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် app များကိုအဆိုပါအပူဖြစ်စေတဲ့ထားတဲ့လေ့လာဆန်းစစ်။ ဒါဟာမှတ်ပုံတင်ပုံမှန်အကွာအဝေးအတွက်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း, အ CPU ကိုအပူချိန်လျော့နည်းစေတယ်လေသောအအေးဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ဖို့အတွက်သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
★ Device ကိုပြန်ကြားရေး
CPU ကို, မှတ်ဉာဏ် (RAM ကို), GPU ကိုဘက်ထရီနဲ့ hardware feature များ၏နေရာလေးကိုအခြေအနေ။
သိုလှောင်မှု space နဲ့ CPU ကို / ဘက်ထရီအပူချိန်, မှတ်ဉာဏ် (RAM ကို) ခြေရာခံထားပါ။
ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုဖြုန်းခြင်းနှင့် overheat ဖို့ device ကိုဖြစ်စေတဲ့ထံမှ Apps ကပကိုရပ်တန့်။
Tune Up ကို task manager ကိုဖွင့်မှတ်ဉာဏ်တံခါးဖုန်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုကောင်းအောင်
တစ်စမတ် Optimizer အဖြစ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများကိုစီမံခန့်ခွဲနေစဉ်အချိန်အားသွင်းကျန်ရှိသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုခြေရာခံ။ monitor App ကိုစားသုံးမှု - ပါဝါ Optimizer သင်တို့သည်တန်ခိုးကိုစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်ချီးကျူးနေချိန်မှာထားတဲ့စနစ်ကလျှောက်လွှာဆိုလိုသည်မှာဘလူးတုသ်, ဝိုင်ဖိုင်သို့မဟုတ်ဒေတာ GPRS ကိုကြည့်ပါပိုဘက်ထရီပါဝါစားသုံးမှု။
ဘက်ထရီဆရာဝန် 2018 - မြန်အားသွင်းကိရိယာ - စူပါ Cleaner
9.21 ကို MB